China Cat Cat Nest Litter Pet Cat and Dog Bed Small Dog Cat Sleeping Bag Mat Closed Cat House Keep Warm in Winter mveliso kunye nabenzi | UMiaSein
Ikati yeNest Inja yokuLalisa iPati ikati kunye nenja yokulala inja encinci Ikati yokulala ibhedi evaliweyo yeKati yeNdlu Gcina ukufudumala ebusika
Igama lemveliso:Ikati yeNest Inja yokuLalisa iPati ikati kunye nenja yokulala inja encinci Ikati yokulala ibhedi evaliweyo yeKati yeNdlu Gcina ukufudumala ebusika
Inkcazo:Khetha amalaphu akumgangatho ophezulu, angenakulimaza ulusu lwezilwanyana zasekhaya, ukuze izilwanyana zifumane amava angcono. Umsebenzi olungileyo, iimveliso ezizinzileyo nezomeleleyo.
Igama lomxholo: Indlwane yezilwanyana
Uhlobo: Indlwane yekati
Ubungakanani (nge-cm): S-47 * 45cm, M-53 * 51cm
Phawu: Vumela izilwanyana ziphumle
Uhlobo lwengubo: Indwangu + emfutshane emfutshane
Indlela yokuhlamba: Unokuhlamba iimpahla zenja ngesepha yomntu. Ukuba isilwanyana sineentsholongwane ezizodwa ezinokufumaneka kwizilwanyana zasekhaya, kuya kuba luncedo ngakumbi ukubulala amaqanda e-parasite angcoliswe lula zizambatho zezilwanyana zasekhaya. Impahla yenja kunye neyabantu kufuneka ihlanjwe ngokwahlukeneyo. Sukusebenzisa i-chlorine bleach okanye i-oxygen bleach.
Indlela yokugcina: yigcine yodwa okanye kwiphepha elisongelayo ukunqanda ukudaywa yenye impahla.
Ukuxhasa ulwenziwo: Kuphephe ukunxibelelana namanqaku abukhali kunye arhabaxa kunye namanqaku alkaline awomeleleyo; khetha indawo epholileyo kunye nomoya opholileyo kwaye owomileyo ngaphambi kokuqokelelwa; vula ikhabhathi rhoqo ngexesha lokuqokelela ukuze ungene kwaye uhlale womile; kubushushu obuphezulu nakwixesha elinomswakama, umoya womile amatyeli amaninzi ukunqanda ukungunda.
Egqithileyo Iingubo zenja Intwasahlobo kunye neAntumn Coat Imilenze emibini yeeJesi yeeSweta zePuppy Izambatho zePetethi ezincinci ezinokuphefumla
Okulandelayo: Iingubo zePuppy Inja yabasetyhini iTeddy Bichon cotton Coat Chihuahua Bulldog Corgi amantshontsho amancinci aqinisa isilwanyana ekwindla nasebusika iimpahla